Ny fantatray momba ny COVID-19 Omicron: Manazava ny Filoha
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo » Ny fantatray momba ny COVID-19 Omicron: Manazava ny Filoha
Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • WTN
Filohan'i Afrika Atsimo Cyril Ramaphosa
Navoaka androany ny transcript an'ny filoha Cyril Ramaphosa niresaka tamin'ny Firenena Afrikana Tatsimo momba ny fivoaran'ny ezaka amin'ny fametrahana ny valan'aretina COVID-19.
Ny Filohan'ny Repoblikan'i Afrika Atsimo Cyril Ramaphosa no lehiben'ny fanjakana sy lehiben'ny governemantan'ny Repoblikan'i Afrika Atsimo. Ny filoha no mitantana ny fahefana mpanatanteraka ao amin'ny governemanta ary izy no lehiben'ny komandin'ny Tafika Nasionaly Afrikana Tatsimo.
Androany izy dia nanavao ny Vahoaka Afrikana Tatsimo sy izao tontolo izao momba ny toe-javatra mipoitra momba ny variana Omicron an'ny COVID-19.
Fanambaran'ny Filoha Cyril Ramaphosa:
Ry namako Afrikana Tatsimo,
Tany am-piandohan'ity herinandro ity, ny mpahay siansa dia nahita karazany vaovao amin'ny coronavirus izay mahatonga ny aretina COVID-19. Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia nanome anarana azy io ho Omicron ary nanambara izany ho 'variant of concern'.
Ny variana Omicron dia nofaritana voalohany tany Botswana ary taty aoriana tany Afrika Atsimo, ary ny mpahay siansa koa dia nahita tranga tany amin'ny firenena toa an'i Hong Kong, Australia, Belzika, Italia, Royaume-Uni, Alemaina, Aotrisy, Danemark ary Israely.
Ny famantarana voalohany an'io variana io dia vokatry ny asa tsara nataon'ny mpahay siansa any Afrika Atsimo ary vokatra mivantana avy amin'ny fampiasam-bola nataon'ny sampan-draharaha momba ny siansa sy ny fanavaozana ary ny fahasalamana amin'ny fahaiza-manara-maso genomika.
Isika dia iray amin'ireo firenena eto amin'izao tontolo izao izay nanangana tambajotra fanaraha-maso manerana ny firenena mba hanampiana antsika hanara-maso ny fihetsiky ny COVID-19.
Ny fahafantarana mialoha an'io variana io sy ny asa efa nahafantatra ny fananany sy ny mety ho vokany dia midika fa vonona kokoa isika hamaly ilay variana.
Manome voninahitra ny mpahay siansa rehetra izahay izay malaza eran-tany sy hajaina fatratra ary naneho fa manana fahalalana lalina momba ny epidemiolojia izy ireo.
Misy zavatra maromaro efa fantatsika momba ny variana vokatry ny asa nataon'ny mpahay siansa momba ny fanaraha-maso genome.
Voalohany, fantatsika izao fa manana fiovan'ny Omicron lavitra noho ny variana teo aloha.
Faharoa, fantatsika fa ny Omicron dia mora hita amin'ny fitsapana COVID-19 ankehitriny.
Midika izany fa ny olona manana soritr'aretina COVID-19 na nifandray tamin'ny olona voan'ny COVID-19 dia tokony mbola hanao fitiliana.
Fahatelo, fantatsika fa tsy mitovy amin'ny variana hafa mivezivezy io variana io ary tsy mifandray mivantana amin'ny variana Delta na Beta.
Fahefatra, fantatray fa ilay variana dia tompon'andraikitra amin'ny ankamaroan'ny otrikaretina hita any Gauteng tato anatin'ny tapa-bolana lasa izay ary miseho any amin'ny faritany hafa rehetra izao.
Mbola misy zavatra maromaro momba ilay variana tsy fantatsika, ary mbola miasa mafy ny mpahay siansa any Afrika Atsimo sy any amin'ny faritra hafa manerana izao tontolo izao.
Ao anatin'ny andro sy herinandro vitsivitsy, rehefa misy angon-drakitra bebe kokoa, dia hanana fahatakarana bebe kokoa momba ny:
na omicron dia mifindra mora kokoa amin'ny olona,
na mampitombo ny mety hisian'ny reinfection izany,
raha miteraka aretina mafy kokoa ilay variana, ary,
ny fahombiazan'ny vaksiny ankehitriny manohitra ny variana Omicron.
Ny famantarana ny Omicron dia mifanandrify amin'ny fiakaran'ny otrikaretina COVID-19 tampoka.
Nifantoka tany Gauteng io fitomboana io, na dia mitombo ihany aza ny tranga any amin'ny faritany hafa.
Nahita tranga vaovao 1,600 eo ho eo isika tao anatin'ny 7 andro farany, raha oharina amin'ny tranga 500 isan'andro isan'andro tamin'ny herinandro teo, ary tranga vaovao 275 isan'andro ny herinandro talohan'izay.
Ny ampahany amin'ny fitsapana COVID-19 izay tsara dia niakatra avy amin'ny 2 isan-jato ka hatramin'ny 9 isan-jato tao anatin'ny herinandro latsaka.
Fiakaran'ny otrikaretina faran'izay mafy izany ao anatin'ny fotoana fohy.
Raha mitohy miakatra ny tranga dia afaka manantena ny hiditra amin'ny onjam-pandrefesana fahefatra isika ao anatin'ny herinandro vitsivitsy ho avy, raha tsy haingana.
Tsy tokony hahagaga izany.
Ny epidemiolojista sy ny modely amin'ny aretina dia nilaza taminay fa tokony hanantena ny onja fahefatra amin'ny fiandohan'ny volana Desambra isika.
Ny mpahay siansa koa dia nilaza taminay fa manantena ny fiposahan'ny variana vaovao.
Betsaka ny ahiahy momba ny variana Omicron, ary mbola tsy azonay antoka tsara hoe ahoana no handehanany.
Na izany aza, efa manana ny fitaovana ilaina mba hiarovana ny tenantsika amin'izany isika.
Fantatsika tsara ny variana mba hahafantarana izay tokony hatao mba hampihenana ny fifindran'ny aretina sy hiarovana ny tenantsika amin'ny aretina mafy sy ny fahafatesana.
Ny voalohany, ny fitaovana matanjaka indrindra ananantsika dia ny vaksiny.
Hatramin'ny nivoahan'ny vaksiny COVID-19 voalohany tamin'ny faramparan'ny taon-dasa, dia hitantsika ny fomba nampihenan'ny vaksiny ny aretina mafy, ny hopitaly ary ny fahafatesana tany Afrika Atsimo sy eran'izao tontolo izao.
Mandeha ny vaksiny. Mamonjy aina ny vaksiny!
Hatramin'ny nanombohantsika ny fandaharan'asa fanaovana vaksiny ho an'ny daholobe tamin'ny Mey 2021, maherin'ny 25 tapitrisa ny fatran'ny vaksiny natao tany Afrika Atsimo.
Zava-bita miavaka izany.
Io no fitsabahana ara-pahasalamana mivelatra indrindra natao teto amin'ity firenena ity tao anatin'ny fotoana fohy.
Iraika amby efapolo isan-jaton'ny olon-dehibe no nahazo fatra vaksiny iray farafahakeliny, ary 35.6 isan-jaton'ny olon-dehibe Afrikana Tatsimo no vita vaksiny tanteraka amin'ny COVID-19.
Ny tena zava-dehibe dia ny 57 isan-jaton'ny olona 60 taona no ho miakatra no vita vaksiny tanteraka, ary ny 53 isan-jaton'ny olona eo anelanelan'ny 50 sy 60 taona no vita vaksiny tanteraka.
Na dia mahafinaritra aza izany fandrosoana izany, dia tsy ampy ny mamela antsika hampihena ny otrikaretina, hisorohana ny aretina sy ny fahafatesana ary hamerina ny toekarentsika.
Maimaim-poana ny fanaovana vaksiny miady amin'ny COVID-19.
Anio alina dia miantso ny olona rehetra tsy mbola vita vaksiny aho mba hanatona tsy misy hatak'andro any amin'ny toeram-pitsaboana akaiky azy.
Raha misy olona ao amin'ny fianakavianao na amin'ny namanao tsy vita vaksiny dia miantso anao aho mba hamporisika azy hanao vaksiny.
Ny fanaovana vaksiny no fomba lehibe indrindra hiarovana ny tenanao sy ny manodidina anao amin'ny variana Omicron, mba hampihenana ny fiantraikan'ny onja fahefatra ary hanampy amin'ny famerenana ny fahalalahana ara-tsosialy izay irintsika rehetra.
Zava-dehibe ihany koa ny fanaovana vaksiny amin'ny fiverenan'ny toekarentsika amin'ny asany feno, amin'ny famerenana ny dia, ary amin'ny fanarenana ireo sehatra marefo toy ny fizahan-tany sy ny fandraisana vahiny.
Ny fivoaran'ny vaksiny ananantsika miady amin'ny COVID-19 dia vita noho ireo olon-tsotra an-tapitrisany izay nanolo-tena handray anjara amin'ireo fitsapana ireo mba hampandrosoana ny fahalalana siantifika ho tombontsoan'ny olombelona.
Izy ireo no nanaporofo fa azo antoka sy mahomby ireo vaksiny ireo.
Ireo olona ireo no mahery fontsika.
Manatevin-daharana ny laharan'ny mpiasan'ny fahasalamana izay lohalaharana amin'ny ady amin'ny areti-mifindra nandritra ny roa taona izy ireo, ary manohy mikarakara ny marary, izay manohy manao vaksiny ary manohy mamonjy aina.
Mila mieritreritra momba ireo olona be herim-po isika rehefa mieritreritra ny hanao vaksiny.
Amin'ny fanaovana vaksiny dia tsy miaro ny tenantsika fotsiny isika, fa mampihena ihany koa ny tsindry amin'ny rafi-pitsaboana sy ny mpiasan'ny fahasalamana ary mampihena ny loza ateraky ny mpiasan'ny fahasalamana.
Afrika Atsimo, toy ny firenena maro hafa, dia mijery vaksiny booster ho an'ny olona atahorana indrindra ary mety hahasoa ny booster.
Ireo mpiasan'ny fahasalamana ao amin'ny fitsarana Sisonke, izay maro amin'izy ireo no natao vaksiny mihoatra ny enim-bolana lasa izay, dia atolotra fatra fanamafisam-peo Johnson & Johnson.
Pfizer dia nametraka fangatahana tany amin'ny Manampahefana mifehy ny vokatra ara-pahasalamana Afrikana Tatsimo ho an'ny fatra fahatelo hotanterahina aorian'ny andiany voalohany misy fatra roa.
Ny Komitin'ny Mpanolo-tsaina ny Minisitra momba ny Vaksiny dia efa nanondro fa hanome soso-kevitra ny fampidirana an-tsehatra ny boosters manomboka amin'ny vahoaka be taona.
Ny olona hafa voan'ny immunodeficiency, toy ny amin'ny fitsaboana homamiadana, ny dialyse renal, ary ny fitsaboana amin'ny steroïde ho an'ny aretina auto-immune, dia mahazo dosie booster araka ny tolo-kevitry ny dokotera.
Amin'ny maha-olon-tsotra antsika, amin'ny maha-orinasa sy amin'ny maha-governemanta antsika, dia manana andraikitra isika hiantoka fa ny olona rehetra eto amin'ity firenena ity dia afaka miasa, mandehandeha ary mifanerasera am-pilaminana.
Noho izany dia nanao fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka ara-tsosialy sy ireo mpandray anjara hafa izahay amin'ny fampidirana fepetra izay mahatonga ny vaksiny ho fepetra ahafahana miditra amin'ny toeram-piasana, hetsika ho an'ny daholobe, fitateram-bahoaka ary toeram-bahoaka.
Tafiditra ao anatin'izany ny fifanakalozan-kevitra izay natao tao amin'ny NEDLAC teo amin'ny governemanta, ny mpiasa, ny orinasa ary ny vondrom-piarahamonina, izay misy fifanarahana malalaka momba ny ilàna ny fepetra toy izany.
Ny governemanta dia nanangana ekipa mpanao asa izay hanao fakan-kevitra midadasika amin'ny fanerena ny fanaovana vaksiny amin'ny hetsika sy toerana manokana.
Ny ekipan'ny asa dia hanao tatitra any amin'ny komity iraisan'ny ministera momba ny vaksiny tarihin'ny filoha lefitra, izay hanome tolo-kevitra amin'ny kabinetra momba ny fomba fiasa ara-drariny sy maharitra amin'ny fahazoan'ny vaksiny.
Tsapanay fa olana sarotra sy saro-pady ny fampidirana fepetra toy izany, saingy raha tsy dinihina amin'ny fomba matotra sy amin'ny maha maika izany, dia mbola ho mora voan'ny karazany vaovao izahay ary mbola hijaly amin'ny onjam-piraisana vaovao.
Ny fitaovana faharoa ananantsika hiadiana amin'ilay variana vaovao dia ny fanohizana ny fanaovana saron-tava isaky ny eny amin'ny toerana malalaka sy miaraka amin'ny olona ivelan'ny tokantranontsika.
Misy porofo be dia be izao fa ny fanaovana saron-tava araka ny tokony ho izy sy tsy tapaka amin'ny saron-tava na saron-tava sahaza amin'ny orona sy ny vava no fomba tsara indrindra hisorohana ny fifindran'ny viriosy amin'ny olona iray.
Ny fitaovana fahatelo ananantsika hiadiana amin'ny variana vaovao dia ny mora indrindra sy be dia be: rivotra madio.
Midika izany fa tsy maintsy miezaka araka izay azo atao ny any ivelany isika rehefa mihaona amin'ny olona ivelan'ny tokantranontsika.
Rehefa ao an-trano miaraka amin'ny olon-kafa isika, na anaty fiara, fiara fitateram-bahoaka ary taxi, dia mila misokatra ny varavarankely mba hahazoana antoka fa afaka mikoriana malalaka ny rivotra eny amin'ny habakabaka.
Ny fitaovana fahefatra ananantsika hiadiana amin'ilay variana vaovao dia ny fisorohana ny fivoriam-be, indrindra ny fivoriana an-trano.
Tokony hovana amin'ny endrika virtoaly ny fivoriam-be toy ny fihaonambe sy fivoriana lehibe, indrindra ireo izay mitaky olona maro hifandray akaiky mandritra ny fotoana maharitra.
Ny lanonana faran'ny taona sy ny firavoravoana amin'ny faran'ny taona ary ny fankalazana hafa dia tokony hahemotra, ary ny olona tsirairay dia tokony hieritreritra indroa alohan'ny hanatrehana na hikarakara fivoriana.
Raha misy fivoriana, dia tsy maintsy tandremana akaiky ny protocole COVID rehetra ilaina.
Ny fifandraisana fanampiny rehetra ananantsika dia mampitombo ny risika ho voan'ny aretina na hifindran'ny olon-kafa.
Ry zareo Afrikana Tatsimo namana,
Nivory omaly ny filankevitry ny komandy nasionaly momba ny coronavirus mba handinika ny fiakaran'ny otrikaretina vao haingana sy ny mety ho fiantraikan'ny variana Omicron.
Narahin’ny fivorian’ny filankevitry ny fandrindrana sy ny kabinetran’ny filoham-pirenena, androany, ny fanapahan-kevitra ny amin’ny tokony hijanonan’ny firenena ao amin’ny laharana faha-1 amin’ny coronavirus ny firenena amin’izao fotoana izao ary tokony hitoetra amin’ny toerany ny fanjakana nasionaly misahana ny loza.
Tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsy hametraka fameperana bebe kokoa amin'ity dingana ity, dia noheverinay fa rehefa tojo onjam-pahavoazana teo aloha izahay, dia tsy nisy ny vaksiny, ary vitsy kokoa ny olona natao vaksiny.
Tsy izany intsony no zava-misy. Ny vaksiny dia azon'ny olona 12 taona no ho miakatra, maimaim-poana, any amin'ny toerana an'arivony manerana ny firenena.
Fantatsika fa misoroka aretina mafy sy fidirana hopitaly izy ireo.
Fantatsika ihany koa fa ny coronavirus dia hiaraka amintsika mandritra ny fotoana maharitra. Noho izany dia tsy maintsy mitady fomba hitantanana ny valan'aretina isika ary mametra ny fanelingelenana ny toe-karena ary miantoka ny fitohizana.
Tsy haharitra anefa izany fomba fiasa izany raha tsy ampitombointsika ny tahan’ny vaksiny, na tsy manao saron-tava, na tsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana fototra.
Tokony hotadidintsika rehetra fa amin'ny resaka fitsipika Alert Level 1:
Mbola misy ny tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina manomboka amin’ny 12 ora alina ka hatramin’ny 4 ora maraina.
Tsy mihoatra ny 750 ny olona afaka mivory ao an-trano ary tsy mihoatra ny 2,000 ny olona afaka mivory any ivelany.
Raha kely loatra ny toerana mba handraisana ireo isa ireo miaraka amin'ny fanalavirana ara-tsosialy mety, dia tsy mihoatra ny 50 isan-jaton'ny fahafahan'ny toerana no azo ampiasaina.
Tsy mihoatra ny 100 ny olona mahazo alalana amin'ny fandevenana, ary ny fiaretan-tory amin'ny alina, ny fivoriana aorian'ny fandevenana, ary ny fiaraha-mivory aorian'ny ranomaso dia tsy azo atao.
Mbola tsy maintsy atao ny fanaovana saron-tava eny amin’ny toerana imasom-bahoaka, ary mbola heloka bevava ny tsy fanaovana saron-tava rehefa ilaina izany.
Ny fivarotana toaka dia avela araka ny fepetra fahazoan-dàlana mahazatra, saingy tsy azo amidy mandritra ny ora tsy fiasana.
Hanara-maso akaiky ny tahan'ny areti-mifindra sy ny hopitaly izahay mandritra ny andro ho avy ary hijery ny toe-javatra amin'ny herinandro hafa.
Mila hamaritana avy eo raha ampy ny fepetra efa misy na mila fanovana ny fitsipika misy ankehitriny.
Nanomboka ny dingan'ny fanitsiana ny fitsipika ara-pahasalamanay izahay mba hahafahanay mamerina mijery ny fampiasana ny Lalàna momba ny fitantanana ny loza mitantana ny valinteninay amin'ny areti-mifindra, miaraka amin'ny tanjona hanandratana ny firenena nasionalin'ny loza.
Hanatanteraka ihany koa ny drafitra nasionaly momba ny fitsanganana amin'ny maty mba hahazoana antoka fa vonona ny hopitaly sy ny tobim-pitsaboana hafa amin'ny onja fahefatra.
Mifantoka amin'ny fitantanana klinika mahomby, ny fanaraha-maso sy ny fitiliana ny fifandraisana, ny fikarakarana klinika mahomby, ny fisian'ny mpiasan'ny fahasalamana.
Mba hahazoana antoka fa vonona ny tranonay, dia nomanina sy nomanina ho an'ny onja fahefatra ny fandriana hôpitaly rehetra izay azo na ilaina nandritra ny onja fahatelo amin'ny COVID-19.
Miasa ihany koa izahay mba hahazoana antoka fa misy ny famatsiana oksizenina amin'ny fandriana rehetra natokana ho an'ny fikarakarana COVID-19.
Hanohy ny fitarihan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana isika amin'ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena, izay manoro hevitra momba ny fanakatonana ny sisintany.
Tahaka ny ankamaroan'ny firenena hafa, efa manana fitaovana hifehezana ny fanafarana variana any amin'ny firenena hafa isika.
Tafiditra ao anatin'izany ny fitakiana ny hamoahan'ny mpandeha ny taratasy fanamarinana ny fanaovana vaksiny sy ny fitiliana PCR ratsy natao tao anatin'ny 72 ora nandehanana, ary ny fanaovana saron-tava mandritra ny faharetan'ny dia.
Diso fanantenana tanteraka izahay tamin'ny fanapahan-kevitry ny firenena maro mandrara ny dia avy any amin'ny firenena afrikanina tatsimo maromaro taorian'ny famantarana ny variana Omicron.
Izany dia fialana mazava sy tsy mitombina tanteraka amin'ny fanoloran-tena nataon'ny ankamaroan'ireo firenena ireo tamin'ny fivorian'ny firenena G20 tany Roma tamin'ny volana lasa.
Nampanantena izy ireo tamin'io fivoriana io fa hamerina ny dia iraisam-pirenena amin'ny fomba azo antoka sy milamina, mifanaraka amin'ny asan'ireo fikambanana iraisam-pirenena mifandraika amin'izany toy ny World Health Organization, International Civil Aviation Organization, International Maritime Organization, ary ny OECD.
Ny Fanambarana G20 Roma dia nanamarika ny fahasahiranan'ny sehatry ny fizahantany any amin'ireo firenena an-dalam-pandrosoana, ary nanao fanoloran-tena hanohana ny "famerenana haingana, maharitra, mahatafiditra ary maharitra ny sehatry ny fizahantany".
Ny firenena izay nametraka fameperana ny diantsika sy ny sasany amin'ireo firenena rahavavin'i Afrika Atsimo dia ahitana an'i Royaume-Uni, Etazonia, mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana, Kanada, Torkia, Sri Lanka, Oman, Emirà Arabo Mitambatra, Aostralia, Japon, Thailand, Seychelles , Brezila, ary Guatemala, ankoatra ny hafa.
Ireo fameperana ireo dia tsy mitombina ary manavakavaka tsy ara-drariny amin'ny firenentsika sy ireo firenena rahavavin'i Afrika Atsimo.
Ny fandrarana ny dia dia tsy ampahafantarin'ny siansa, ary tsy hahomby amin'ny fisorohana ny fiparitahan'ity variana ity.
Ny hany zavatra hataon'ny fandrarana ny fitsangatsanganana dia ny fanimbana bebe kokoa ny toekaren'ireo firenena voakasik'izany ary manimba ny fahafahan'izy ireo mamaly, ary miverina amin'ny valan'aretina.
Miantso ireo firenena rehetra izay nametraka fandrarana ny fivezivezena amin'ny firenentsika sy ireo firenena rahavavin'i Afrika Atsimo izahay mba hanova haingana ny fanapahan-keviny sy hanaisotra ny fandrarana izay napetrany alohan'ny hisian'ny fahasimbana bebe kokoa amin'ny toekarentsika sy ny fiveloman'ny vahoakantsika.
Tsy misy fanamarinana ara-tsiansa ny fitazonana ireo fameperana ireo.
Fantatsika fa ity viriosy ity, tahaka ny viriosy rehetra, dia miova ary mamorona karazany vaovao.
Fantatsika ihany koa fa nitombo be ny mety hisian'ny karazana variana henjana kokoa rehefa tsy misy vaksiny ny olona.
Izany no nahatonga anay nanatevin-daharana ireo firenena, fikambanana ary olona maro eran-tany izay niady ho an'ny rehetra mba hahazoana vaksiny mitovy.
Nolazainay fa ny tsy fitoviana amin'ny vaksiny dia tsy vitan'ny hoe mandany aina sy fivelomana any amin'ireo firenena tsy mahazo miditra fa manohintohina ny ezaka eran-tany handresena ny valan'aretina.
Ny fipoiran'ny variana Omicron dia tokony ho fanairana ho an'izao tontolo izao fa tsy azo avela hitohy ny tsy fitoviana amin'ny vaksiny.
Mandra-pahatongan'ny vaksiny rehetra dia ho tandindomin-doza ny rehetra.
Mandra-pahatongan'ny vaksiny rehetra dia tokony hanantena isika fa hisy karazany maro kokoa hipoitra.
Ireo variana ireo dia mety ho mora mifindra kokoa, mety hiteraka aretina mafy kokoa, ary mety hahatohitra kokoa ny vaksiny ankehitriny.
Raha tokony handrara ny fitsangatsanganana, ireo firenena manankarena eran-tany dia mila manohana ny ezaky ny toekarena an-dalam-pandrosoana mba hidirana sy hamokarana fatra vaksiny ampy ho an'ny olony tsy misy hatak'andro.
Ny fipoiran'ny variana Omicron sy ny fiakaran'ny tranga vao haingana dia nanambara mazava fa tsy maintsy miaina miaraka amin'ity virus ity isika mandritra ny fotoana fohy.
Manana ny fahalalana izahay, manana traikefa ary manana fitaovana hitantana ity areti-mifindra ity, hanohy ny asa maro isan'andro, ary hanarenana ny toekarentsika.
Manana ny fahafahana mamaritra ny lalana hodiavin’ny firenentsika isika.
Mila manao vaksiny ny tsirairay amintsika.
Isika tsirairay avy dia mila mampihatra ny protocole ara-pahasalamana fototra toy ny fanaovana saron-tava, fanasana na fanasan-tànana tsy tapaka, ary fisorohana ny toerana be olona sy mihidy.
Mila mandray andraikitra amin'ny fahasalamantsika sy ny fahasalaman'ny manodidina antsika ny tsirairay amintsika.
Samy manana ny andraikiny ny tsirairay.
Tsy ho resin'ity areti-mifindra ity isika.
Efa nanomboka nianatra niaina tamin’izany isika.
Haharitra isika, handresy ary handroso isika.
Andriamanitra hitahy an'i Afrika Atsimo sy hiaro ny olony.
Misaotra anao aho.
The Tambajotra fizahan-tany manerantany ary ny Birao fizahantany afrikanina dia niantso ny fizarana Vaksiny mitovy sy ny fanovana mba hiantohana ny fiaramanidina iraisam-pirenena amin'ny COVID019
Miantso ny WTN Mandat ny Vaksiny Maneran-tany sy ny fizarana mitovy
Torolàlana WTN: Ahoana ny fandehanana miaraka amin'ny Omicron Covid Strain Vaovao?